Governemanta Mapar : Mampihorohoro vahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaGovernemanta Mapar : Mampihorohoro vahoaka
20/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niampy roa indray ny olona matin’ny pesta. Voamarina fa pesta no nahafaty ireo mpivady tany amin’ny distrikan’i Miarinarivo, kaomina Analavory, fokontany alatsinainy. Nampitahorin’ny minisitera anefa ny mpitsabo iray namoaka ny vaovao. Efa mihatra eto amin’ny firenena ity areti-mandoza ity ankehitriny, sady ao anatin’ny vanim-potoanan’ny pesta isika izao. Sarotra anefa ny fahazoam-baovao eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Teny an’avona no setrin’ny fangataham-baovao eny amin’ity minisitera ity, na manantona eny ifotony izany, na amin’ny alalan’ny antso an-tariby. Tapahin’ireo tompon’andraikitra ny antso, ary raha mba mamerina miantso dia tsy raisina intsony. Ny olona mba manome vaovao marim-pototra anefa tabatabaina ary lazaina fa, “tsy andraikitry ny mampahafantatra izany amin’ny mpanao gazety”. Fa izy tokoa izany no tompon’andraikitra e? Tsy ny olona nandray andraikitra voalohany amin’ny fampahafantarana fa nisy ny trangana pesta, ary efa nisy ny namoy ny ainy ve? Sa andrasana efa ho 100 indray no maty vao hikoropaka sy hiantso vonjy any ivelany ny minisitera. Sa ihany koa handrasana hirongatra manerana ny Nosy vao hiantso vonjy amin’ny mpanao gazety izay tsinontsinoavina hamoaka vaovao marina hoe, “mila anareo mpanao gazety hanentana ny olona izahay. Aza mifanabarabara ry minisitera a!”
Manana zo hahazo vaovao marina sy marim-pototra ny vahoaka, ary tsy zava-poana ilay izy fa areti-mandoza ka afaka manaitra ny sain’ny maro amin’ny fitandremana rehetra tokony hataony ny mpanao gazety sa hitovy tamin’ny herintaona indray. Izany hoe, tombony ho an’ny mponina ny mahalala fa misy pesta indray eto Madagasikara, na amin’ny fokontany iray na amin’ny kaomina iray, na amin’ny distrika iray na amin’ny faritany iray, satria afaka mandray fepetra ny olona ao amin’ilay toerana misy azy. Ohatra amin’izany, ny fanadiovana ny tanàna, sy ny fepetra rehetra mifandraika amin’izay. Tsy mba toa ny governemanta Mahafaly Olivier, izay nanome baiko ny minisiteran’ny Fahasalamana tamin’ny fitantanan’ny Profesora Andriamanarivo Lalatiana ka nalalaka ny fahazoam-baovao. Tamin’ity fitantanan’ny governamanta Ntsay Christian ity anefa mihidy tanteraka ny fahazoam-baovao ao amin’ny minisitera tantanin’i Profesora Rantomalala Yöel, ary efa misy maty vao fantatra. Amin’izay tsy ny minisitera no hahalalana azy fa ireo mpitsabo any ifotony. Ireto farany anefa mbola rahonana raha mba milaza ny marina. Tamin’ny andron’ny Profesora Andriamanarivo Lalatiana, vao misy tranga hita dia nandray andraikitra avy hatrany ary alefa mitoka-monina ny olona voany nefa ity mbola variana amin’ny fanomanana fifidianana fa tsy ny fahasalamam-bahoaka no mamaiky aza amin’ny maha-minisitera mpiahy ny fahasalamana azy izay. Raha izao fizotran-javatra izao, tena ho be dia be ny ho faty. Sa hamono vahoaka ny tanjona? Satria tsy manome fotoana hahafahan’ny mponina mandray andraikitra. Tao anatin’ny roa herinandro izay, efa tranga 11 no hita nefa mbola tsy misy ny fandraisana andraikitra fa mangina tanteraka ny ministera. Ireo ary tsy mbola tarehimarika ofisialy fa tsy hay ny ankoatra any, noho io tsy fandraisana andraikitra io hatrany. Raha tsiahivina, tranga 11 hatreto no fantatra fa niseho tany amin’ny faritra efatra eto Madagasikara dia ny tany Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Itasy ary Analamanga, tao anatin’ny roa herinandro monja. Izay pesta aretin-tratra sy atoditarimo. Tranga izay nahafatesana olona miisa 4 raha toa ka avotra soa aman-tsara ny 6. Ny roa tamin’ireo, ireo mpivady, tany Analavory, raha toa ka vehivay ny iray, tany Ambalavao, ary zazalahy kely 6 taona ny fahefatra tany Ankazobe.